युगसम्बाद साप्ताहिक - “वाफको पर्दा”भित्र पसेर हेर्दा
Tuesday, 04.07.2020, 04:16pm (GMT+5.5) Home Contact
“वाफको पर्दा”भित्र पसेर हेर्दा
Monday, 03.26.2012, 03:29pm (GMT+5.5)
“वाफको पर्दा” स्रष्टा पोषरमण चापागाईको पछिल्लो निबन्धात्मक कृति हो । निबन्ध, कथा, बालकथा र नियात्रा जस्ता अनेक विधामा गरी हालसम्म उहाँका दश कृति प्रकाशित भैसकेका छन् । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवामा रही नेपाली भाषा–साहित्य शिक्षणमा संलग्न रहनुभएका स्रष्टा चापागाईको निबन्ध लेखनको भाषा शैली मौलिक प्रकृतिको छ । आफूले देखे–भोगेका र अनुभूत गरेका कुनै पनि विषयलाई हृदग्राही चित्रमय शैलीमा प्रस्तुत गर्नुसक्ने क्षमता सर्जक चापागाईमा छ । उहाँको पछिलो निबन्ध संग्रह ‘वाफको पर्दा’ परम्परागत शैलीमा लेखिएका निबन्धहरूभन्दा भिन्न शैली अपनाएर पाठकहरूको मन आकर्षत गरेको छ । उहाँका निबन्धमा स्थानगत विशिष्टताको सजीव चित्रण, आत्मगत अनुभूतिका छचल्किएको भावलहरी र समयचेत बोधी विचार प्रवाहको त्रिवेणी छ । निजात्मक अनुभूतिलाई सार्वजनिकीकरण गरेर सहृदयी पाठकसंग भावनात्मक सम्बन्ध जोड्नसक्ने क्षमता निबन्धकारले विकसित गर्दैगएको देखिन्छ ।
‘वाफको पर्दा’मा उनन्तीसवटा निबन्धहरू संग्रहित छन् । नियात्रा खण्ड र निबन्ध खण्ड गरी दुई खण्डमा विभाजित रचनाहरूले उहाँको निबन्ध लेखनको निजात्मक शैलीसंग साक्षात्कार गराएका छन् । नियात्रा खण्डमा नेपाल र भारतका सांस्कृतिक, धार्मिक महत्वका विविध क्षेत्रको भ्रमण गर्दाको पृष्ठभूमि, यात्रा प्रबन्ध र यात्रा गर्दाको अवस्था र परिस्थितिजन्य अनुभूतिलाई विभिन्न उपशीर्षक दिएर प्रस्तुत गरिएका नौवटा लेख रचनाहरू समाविष्ट छन् भने निबन्ध खण्डमा सामसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रीत, समयचेतले ओतप्रोत भएर रचिएका बीसवटा निबन्धहरू समावेश गरिएका छन् ।
नियत्रा खण्डका निबन्धहरूले यात्रास्थलको सूक्ष्म परिचय दिनुका साथै प्रकृतिप्रेम, सांस्कृतिक प्रेम र राष्ट्रप्रेमको भावलहरी पनि उठाउनुभएको छ । लेखकको भ्रमणप्रिय स्वभावले यात्रानुभूतिको संवेदनालाई सजीव ढङ्गले प्रस्तुत गर्न प्रेरित गरेको छ । उहाँको निजात्मक शैलीभित्र उत्तिकै कलात्मकता छ । जीवनको मूल्यलाई मानवीय चेतनाले ओतप्रोत गर्न अभिप्रेरित छन् । एउटै निबन्धलाई विभिन्न उपशीर्षक दिएर कतै अति छोटा र कतै लामा अनुच्छेदमा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने उहाँको कला समसामयिक निबन्ध लेखनशैलीभन्दा नितान्त भिन्न र मौलिक छ । उहाँको प्रयोगपरकता– ‘हाइकु निबन्ध’को प्रयोगपरकता र सैद्धान्तिक मान्यता स्थापनातर्फ केन्द्रीत छ ।
निबन्धकारले जीवनका विविध पक्षलाई अनुभवजन्य धारणाका रुपमा प्रस्तुत गरेर अभिव्यञ्जित गर्नुभएको छ । निबन्धहरूमा कतै नितान्त वैयक्तिक, कतै सामाजिक र राजनीतिक, कतै सांस्कृतिक विषयवस्तु छचल्किएका छन् भने कतै आध्यात्मिक, कतै प्रकृतिप्रेमको संमोहन छचल्किएको छ । उहाँका निबन्धहरू चेतनाबोधी भएकाले समाजोपयोगी छन् । स्रष्टाको प्रयोगपरकताले नेपाली निबन्ध लेखनको नयाँ शैली वरण गरेको छ । ‘वाफको पर्दा’ पठनीय निबन्ध संग्रह हो ।
२०६८ वैशाखमा प्रकाशित २०० पृष्ठको यो निबन्ध संगैहको भूमिका लेखन प्रा.डा. अभि सुवेदी र प्रा. राजेन्द्र सुवेदीले गर्नुभएको छ भने सम्पादन हरि मञ्जुश्री र प्रकाशन अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल पब्लिकेशनले गरेको छ । कृतिको मूल्य रु २१०।– छ ।